Oday dhaqameed go’aan kasoo saaray falkii kufsiga ee Galdogob loogu geystay labo gabdhood (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Oday dhaqameed go’aan kasoo saaray falkii kufsiga ee Galdogob loogu geystay labo gabdhood (AKHRISO)
Wararka naga soo gaaraya degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in go’aan dhowr qodob ka kooban ay soo saareen odayaasha beelaha ay kasoo kala jeedaan gabdhihii dhawaan lagu kufsaday degmadaasi iyo wiilashii kufsiga geystay.
Odayaasha labada dhinac ayaa qodobada ay soo saareen isla garteen inuu yahay midka kaliya oo xal u noqon kara kiiska kufsiga ah ee dhawaan degmada Galdogob loogu geystay labo gabdhood oo muuqaladooda lagu baahiyay baraha ay bulshada ku xiriirto.
Wiilashii falkaan kufsiga ah geystay ayaa muuqaalo ay iska qaadeen xilligii ay kufsiga kula kacayeen mid ka mid ah gabdhahaasi soo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto, iyadoona arrintaasi si weyn loo cambaareeyay.
Qodobada ay odayaasha labada dhinac isku af-garteen ayaa waxaa ka mid ah:-
– In wiilashii falka kufsiga ah geystay lagu fuliyo waxa ay shareecada Islaamka ka qabto.
– In goobta uu xukunka ka dhacaayo ay goob-joog ka ahaadaan maamulka Puntland
– In “MAG” la siiyo mid ka mid ah qoyska wiilasha falka geystay oo dhaawac loo geystay xilligii lasoo qabanaayay.
– In maamulka degmada Galdogob uu diyaariyo goobta xukunka lagu fulinaayo.
Dhinaca kale, lama oga xilliga la fulin doonno xukunkaan, iyadoona laga yaabo in arrintaan ay dood ka keenaan qoysaskii ay ka dhasheen wiilasha kufsiga geystay.